GURMAD Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Oodweyne Xafiisyo Cusubna Ka Furtay | FooreNews
Home wararka GURMAD Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Oodweyne Xafiisyo Cusubna Ka Furtay
GURMAD Oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey Oodweyne Xafiisyo Cusubna Ka Furtay
fooreJan 09, 2012wararka0
Oodweyne (Foore)– Boqolaal ka mid ah Dadweynaha ku dhaqan Xarunta Gobolka Daadmadheedh ee Oodweyne ayaa caleemo qoyan ku soo dhaweeyey Masuuliyiinta Urur siyaasadeedka Gurmad oo shalay halkaasi soo gaadhay.
Soo dhaweynta Masuulyiinta ururkaasi ayaa waxa ka qayb qaatay boqolaal ka mida dadweyna Reer Oodweyne oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ay hormood u ahaayeen Cuqaal iyo masuulyiin ka tirsan Golaha Deegaanka Degmada Oodweyne.
Sidoo kalena Madaxda Urur Siyaadeed GURMAD waxa ay maalintii shalay xadhiga ka jareen xafiiska uu ururkaasi ku yeelan doono Xarunta Gobolka Daad-madheedh.
Guddoomiyaha ku meelgaadhka ah ee Ururka GURMAD Nuur Faarax Xirsi oo khudbad xidhacyo badan taabanaysa u jeediyey dadweynaha Reer Oodweyne ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa “ Waxaan idiinku mahad naqayaa sida walaaltinimada leh ee aad iskaga xilsaarteen inaad noo soo dhaweysaan, waxaanan u qaadaynaa qadarin iyo sharaf aad naga mudan tihiin. Waxaanu halkan ku soconaa Madaxdii ururka Gurmad, waxa uu socodaal kayaguna daaran yahay in aanu halkan ka furno xafiiska ururka Gurmad ee Gobolka Daadmadheedh taasoo qayb ka ah in aanu furno xarunta ururka ee Gobolada dalka oo dhan, xafiiskan aanu maanta furanayaana wuxuu ka shaqayn doonaa in aanu helno taageerada dadka Gobolka Daadmadheedh.”
“Ujeedada ururkan siyaasadeed waxay tahay, talladu marna waa Tallo caadiya marna waa tallo gurmad, maanta Somaliland waxa ay u baahan tahay tallo Gurmad oo dhab ah dhinac walbana ah, waxaana aynu u gurmanaynaa wax kasta oo samaan ah isla marknaa danta Guud ee Umaddu ku jirto.” Ayuu yidhi Nuur Faarax.
Guddoomiyaha Ururka Gurmad waxa kale oo uu intaaasi ku daray “Walaalayaal, waxa aynu u gurmanaynaa in anynu gaadhno Dawladnimo ka wanaagsan tan aynu maanta haysano, siyaasada ugu weyn ee ururka Gurmad u taagan yahay waxa weeye in Siyaasadda iyo dalwadnimaada run laga sheego oo aan been laga sheegin, waayo dadkeenu waxay u qabaan in siyaasaddu ay been iyo khiyaamo tahay, taasina waa wax nasiib daro ah.”
Md. Nuur Faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi: “Waxa uu dalkeenu ku tiirsan yahay waa reer miyi, waaxana aynu nahay dad reer Guuraa ah isla markaana ay noloshooda oo dhami miyaga ku tiirsan tahay, dawlad kastoo timaadaana mar walba wey dayacaysay dadka iyo nolosha miyiga. Haddii aanu nahay GURMAD waxaanu doonaynaa in aanu taagno dawlad reer miyi ah, sabatoo ah wadan walba waa in dawladu ay noqoto waxa uu dadkeedu yahay.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Gurmad.
Waxa kale oo isaguna munaasibadaasi ka hadlay Guddoomiye ku xigeenka Golaha Deegaanka ee degmada Oodweyne Xildhibaan Farxaan Aw Faarax isaga oo sheegay inay Oodweyne ku soo daweynayaan Gudoomiyaha ururka Gurmad iyo waftiga ooo hogaaminayo.
Caaqil Maxmed Cabdi Gacmayare oo ka tirsan Cuqaasha deegaankaasi ayaa sheegay inay Dadweynaha reer Oodweyne farxad weyn u tahay inay soo dhaweyaan urur uu hogaaminayo Siyaasi Reer Oodweyne ah oo doonaya inuu noqdo Xisbi Qaran isla markaana uu hogaaminayo Guddoomiye leh han siyaasadeed oo gaadhsiisan Madaxweynenimo.
Urur siyaasadeedka GURMAD ayaa damacsan in uu safarkiisan sii wato isaga oo maalmaha soo socdana xafiisyo ka furan doona golada Sool iyo Sanaag oo uu wakhtigan ku sii jeedo.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo, Hogaanka Xisbiga KULMIYE Iyo Xildhinaanada Golaha Wakiilada Ugu Jira Oo Shalay Shir Albaabadu U Xidhan Yihiin Qasriga Madaxtooyada Isku Haleelay Next PostCiidamo Itoobiyaan Ah Oo Dad Rayida Badhna Laayay Badhna Dhaawac Ku Kaxaystay Deegaanka Xalaxlis